TCDD Adana Mersin နောက်ဆုံးအချိန်ရထား
TCDD Adana Mersin ရထား - Adana Mersin ရထားဇယားများနှင့်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ 2019 - Adana သည် Mersin နှင့် Mersin ပြည်နယ်မီးရထားအကြားအကျယ်ပြန့်ဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ခရီးသွားချိန် ၄၅ မိနစ်ခန့်ကြာသည်။ [ပို ... ]
စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီး Mehmet Fatih Kacar, အာကာသ-အခြေတည်Gökmenလေကြောင်းလေ့ကျင့်ရေးစင်တာ (GUHE ငါ) ၏တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးလေ့ကျင့်ရေးစင်တာလေ့လာခဲ့သည်။ အဆိုပါအာကာသလယ်ပြင်၌အမြိုးသားတူရကီရဲ့ခရီး [ပို ... ]
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းများသည်စွန့်စားမှုပန်းခြံတွင်တွေ့ဆုံ၊ လှုံ့ဆော်မှုလှုပ်ရှားမှုများကို Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာန၏ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲညွှန်ကြားမှုမှစီစဉ်ခဲ့သည်။ Sakarya မြို့တော်စည်ပင်သာယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာန [ပို ... ]
တူရကီကုမ္ပဏီBütem Metal သည်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်၏မျက်နှာကျက်ကိုပြုလုပ်နေပြီးယခုအခါ Dubai Metro မျက်နှာကျက်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ အလင်းရောင်၊ ဆိုင်းထိန်းထားသောမျက်နှာကျက်နှင့်နေစွမ်းအင်စနစ်များထုတ်လုပ်သည့်Bütem Metal၊ [ပို ... ]
Bursa ရှိဆရာများသို့အခမဲ့ကေဘယ်ကြိုးသတင်းများ! Uludağနှင့်မြို့လယ်အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေးသော Bursa Teleferik A, သည် 24-19 နှင့်အတူဆရာတစ် ဦး ကိုပို့ဆောင်လိမ့်မည် [ပို ... ]
တူရကီအတွက်ခါးပတ်လမ်း, တံခါးရုရှားရဲ့လမ်းကြောင်း MI?; ဥရောပမှတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးကုန်တင်ရထား၏နယ်ပယ်အတွင်းခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်းတူရကီ၏ပဲ့တင်သံတွေထွက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဗဟိုစင်္အမည်ရတူရကီ, တရုတ် - ဥရောပအကြား [ပို ... ]
ဤတွင်အသစ်သော Metrobus ဖြစ်ပါတယ် .. ! Ekrem İmamoğluစမ်းသပ်ပြီး; BBB သမ္မတ Ekrem amomamoğluသည်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု metrobus မော်တော်ယာဉ်၏စမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ 29 တင်းကုပ်မှရှည်လျားသောဝေးလံသော Imamoglu, [ပို ... ]
တူရကီရဲ့အရေးအပါဆုံးနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းနှင်းလျှောစီးစင်တာလမ်းကြောင်းအကြား Atabar ယူရာအရပျဆောငျးတှငျးရာသီအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။ Artvin အုပ်ချုပ်ရေးမှူးYılmaz Doruk, XMM X တောင်ပေါ်မှ2အမြင့်၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Yvinm Doruk [ပို ... ]
Sivas 2023 နှစ်ကအမြန်ရထားဖြင့်ရထားမှအင်ကာတာသို့နှစ်တာလား အများပြည်သူစိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်မျှော်နေသော Sivas - Ankara မြန်နှုန်းမြင့်ရထား (YHT) စီမံကိန်းသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သောနှုန်းဖြင့်ဆက်လက်တိုးတက်နေသည်။ အတိတ် [ပို ... ]
? YHT ထုတ်ဝေသည် Siemens ၏ပထမဦးဆုံးအစုကို '' တူရကီအချိန်တွင်မည်သို့ဖြစ်ပျက်; TCDD Transport Inc ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ၊ ဖေဖော်ဝါရီ 2020'den အပိုင်း၊ စမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုအပြီးမြန်နှုန်းမြင့်ရထားများအနက်ပထမဆုံးသော Kamuran Yazıcı [ပို ... ]
BBB Train Driver သည်ဝန်ထမ်းများကိုခန့်ထားလိမ့်မည်။ Istanbul Metropolitan Municipality သည် IMM Career စာမျက်နှာတွင်အလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်အသစ်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လူတိုင်းသိချင်စိတ်နောက်တော်သို့လိုက်သည့်စုဆောင်းမှုကြော်ငြာတစ်ခုမှာ [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်တွင် 595 တစ်ထောင်ကျော်သည်ညဥ့်နက်မြေအောက်ရထားဖြင့်ခရီးထွက်ခဲ့ကြသည်။ မြူနီစီပယ်အရာရှိများကဝင်ငွေကမျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုပြီးရှိတယ်။ Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) 30 ကိုသြဂုတ်လတွင်ည metro 595 ဖြင့်စတင်ခဲ့သည် [ပို ... ]
ISAF 2020 သည်အံ့အားသင့်ဖွယ်တိုးတက်မှုများကိုပြင်ဆင်သည်။ ကဏ္ of မတိုင်မီအနည်းငယ်သောခြေလှမ်းများ ISAF 2020 သည်တိုးတက်မှုများကိုလိုက်နာလိုသောပါဝင်သူများနှင့် visitors ည့်သည်အားလုံးအတွက်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပြင်ဆင်နေသည်။ အောက်တိုဘာလ 8 တွင် 11-2020 24 ။ တစ်ချိန်ကအရပျကိုယူပါလိမ့်မယ် [ပို ... ]
မသန်စွမ်းသူများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးတက်မှု၊ ဝန်ကြီး Turhan သည်“ ငါတို့၏စကားကိုနားထောင်ကြစို့။ သူတို့၏ဘဝများကိုပြောင်းလဲကြပါစို့။ [ပို ... ]